श्रीमतीलाई दैनिक केरा खुवाउनुहोस्, अनि पाउनुहाेस् तपाईकी स्वास्नीमा यस्ताे चमत्कार – aajnepal
HomeRochakश्रीमतीलाई दैनिक केरा खुवाउनुहोस्, अनि पाउनुहाेस् तपाईकी स्वास्नीमा यस्ताे चमत्कार
स्वास्नीलाई दैनिक केरा खुवाउनुहोस्, अनि पाउनुहाेस् तपाईकी स्वास्नीमा यस्ताे चमत्कार मानव शरीरलाई आवश्यक पर्ने पोटासियमका लागि केरा राम्रो स्रोत हो । पोटासियमले रक्तसंचार राम्रो बनाउँछ । साथै मानसिक तनाव पनि कम गर्छ । केरा सबैका लागि फाइदाजनक छ । त्यसमा पनि महिलाका लागि त केरा औषधी नै भन्दा पनि हुन्छ ।
यदि महिलाले दैनिक एक कोसा केरा मात्रै खाने हो भने स्वास्थ्यका लागि धेरै फाइदाजनक हुन्छ । महिलाले केरा खाँदा के फाइदा हुन्छ त ? यो आलेखमा महिलाले दैनिक केरा खाँदा हुने फाइदाबारे उल्लेख गरिएको छ । बाँझोपनाबाट छुटकरा दैनिक केरा खाँदा महिलाहरुमा हुने बाँझोपनाबाट छुटकरा पाउन सकिन्छ । केरामा पाइने पोटासियम नामक तत्वले बाँझोपटनाबाट छुटकरा पाउन मद्दत गर्छ ।
महिनावारीमा हुने समस्याबाट मुक्ति खासगरी भिटामिन ‘बी’ र ‘बी ६’को कमीले महिलालाई महिनावारीको बेला विभिन्न समस्या हुन्छन् । उक्त भिटामिनको कमीले महिनावारीका बेला पेट दुख्ने, अत्यधिक रक्रश्राव हुने खतरा हुन्छ । नियमित केरा सेवन गर्दा शरीरले प्रसस्त रुपमा भिटामिन ‘बी ६’ पाउँछ । जसले महिनावारीको समस्याबाट छुटकरा पाइन्छ । चम्किलो छाला फुस्रो छाला भएका महिलाका लागि नियमित केरा सेवन वरदान सावित हुन सक्छ । केरामा पाइने भिटामिन ‘इ’ले छालालाई चम्किलो बनाउँछ । केरा खाँदा छालामा चमक आउनुका साथै चाउरीपनाबाट जोगाउने गर्दछ ।
रक्तअल्पताबाट बचाउँछ दैनिक रुपमा केरा खाँदा रक्तअल्पताबाट बचिन्छ । केरामा पाइने आइरन र हेमोग्लोविनले रगतको अभाव हुन दिँदैन । साथै केरामा पाइने तत्वले राता राक्तकोष निर्माणमा पनि सहयोग पुर्याउँछ । यो पनि पढ्नुहोस् – निदाउनुभन्दा पहिला विस्तारमा पल्टिएपछि युवतीहरु के सोच्छन् ? गर्भावस्थामा फाइदा गर्भवती महिलालाई सबैभन्दा धेरै फोलिक एसिड आवश्यक पर्छ । केरामा पाइने फोलिक एसिडले गर्भावस्थामा महिलालाई धेरै फाइदा पुर्याउँछ । स्मरण क्षमतामा विकास दैनिक रुपमा केरा खाँदा दिमागले काम गर्ने क्षमतामा बृद्धि हुन्छ । केरामा पाइने तत्वले स्मरण शक्ति बढ्ने गर्छ ।
तौल घटाउन सहयोग केरामा मेटाबोलिजम नामक तत्वको मात्रा बढी हुन्छ । जसले शरीरको तौल घटाउन मद्दत गर्छ । डिप्रेसनबाट मुक्ति केरामा पाइने ट्रिप्टोफेनले मानिसमा सकारात्मक सोचको विकास हुन्छ । केराको नियमित सेवनले डिप्रेसनबाट बचाउँछ । अल्छीपनाबाट छुटकरा केरामा पाइने विभिन्न पोषक तत्वले अल्छीपनालाई दूर गर्छ । काम गर्नु अघि एउटा केरा खाँदा जाँगर बढ्छ । केराले शरीरको तापक्रम पनि नियमित गर्छ । जसकारण केरा खाँदा सीतल भएको महशुष हुन्छ । हड्डी बलियो केरामा पाइने भिटामिनमध्ये क्याल्सियम पनि प्रमुख हो । क्याल्सियमले हड्डीलाई मजवुद बनाउँछ ।